Iiraan oo weydiisatay Interpol inay gacan ka geysato soo qabashada Trump – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Iiraan oo weydiisatay Interpol inay gacan ka geysato soo qabashada Trump
Iiraan oo weydiisatay Interpol inay gacan ka geysato soo qabashada Trump
Iran ayaa sheegtay Isniintii inay u yeertay Interpol inay gacan ka geysato soo xiritaanka madaxweyne Donald Trump iyo 35 kale oo Mareykan ah dilkii bishii Janaayo loo gaysanayay jeneraalkiisii ​​ugu sareeyay Mareykanka.
Xeer ilaaliyaha Tehran Ali Qasi Mehr, oo soo xiganaya wakaalada wararka ee IRNA, ayaa sheegay in 36 sarkaal oo Mareykan ah oo katirsan saraakiisha siyaasada iyo militariga “ay ku lug lahaayeen dilka” General Qassem Soleimani “la baarey waxaana lagu amrey in Interpol lagu soo qabto”.
“Dadkaan waxaa lagu eedeeyay dil iyo falal argagixiso,” ayuu yiri.
Xeer ilaaliyaha ayaa tixraacaya dalabkiisa ah in markale la doorto bisha Nofeember, “Liiska ugu sarreeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, xukunkiisuna waa uu sii socon doonaa xitaa marka uu dhammaado muddadiisa.
Qasi Mehr, oo laga soo xigtay mareegta rasmiga ah ee garsoorka ee Mizan Online, wuxuu yidhi “garsoorka Iiraan wuxuu soo saaray amarro xadhig oo ka dhan ah 36”.
Wuxuu ku baaqay in hay’adda booliiska caalamiga ah ee Interpol ay soo saarto ogeysiisyo casaan ah, kuwaas oo aan la soo xirin warqado laakiin loo soo saaray kuwa doonaya in la maxkamadeeyo ama xukun lagu rido.
Si kastaba ha noqotee, Interpol, waxay u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in faragalinta noocaas oo kale ah ay ka hor imaaneyso dastuurkeeda, iyada oo aan si toos ah loo xaqiijin inay la xiriirtay Iran.
Sida ku xusan qodobka 3-aad ee dastuurka, “waxaa si adag loo mamnuucay Ururka in uu ku lug yeesho faragelin kasta ama howlo siyaasadeed, mid militari, mid diimeed ama midab takoor ah”, ayay tiri hay’adda fadhigeedu yahay magaalada Lyon ee Faransiiska.
“Interpol ma tixgelin doonto codsiyada dabiiciga ah.”
Trump ayaa amar ku bixiyay in la dilo Soleimani bishii Janaayo 3-dii duulimaad aan loo meel dayin oo ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Baghdad.
Soleimani, oo ah halyeey qaran oo guriga joogay, wuxuu ahaa “argagixisada adduunka ugu sareysa” oo “waa in la joojiyaa waqti hore”, ayuu yiri Trump waqtigaas.
Brian Hook, oo ah tilmaamaha Mareykanka ee ku wajahan siyaasada Iran, ayaa ku dhaleeceeyay dalabka Iran ee ku aadan Interpol inuu yahay “dacaayad dacaayad ah”.
“Qiimeynteena ayaa ah in Interpol aysan soo faragelin oo soo saarin digniino casaan ah oo salka ku haya dabeecad siyaasadeed,” ayuu ku yiri shir jaraa’id oo uu ku qabtay caasimada Sacuudiga ee Riyadh.
“Tani wax shaqo ah kuma lahan amniga qaranka, nabada caalamiga ah ama kor u qaadida xasilloonida,” ayuu yiri Hook.
“Waxaan u aragnaa inay tahay waxaas. Waa dacaayad dacaayad ah oo aan cidina si dhab ah u qaadin waxayna Irananka ka dhigeysaa kuwo doqon ah.”
Dilka Soleimani, oo madax u ahaa ciidamada Quddus, waaxda howlgalada shisheeye ee Ilaalada Kacaanka Iran, ayaa ka careysiisay murugo badan oo guriga ka jirtay.
Iiraan ayaa ka aargudatay kadib markii ay gantaalo culus oo gantaal ballistic ah ku garaaceen ciidamadii Mareykanka ee ku sugnaa gudaha Ciraaq, laakiin Trump ayaa ka doorbiday inuu si militari ahaan uga jawaabo.
Intii uu socday weerarkii galbeedka Ciraaq ee Ain Al-Asad waxaa ku dhintay askar Mareykan ah, daraasiin ayaa soo gaaray dhaawac maskaxeed.
Previous articleFanaan Oromo ah oo xalay lagu toogtay caasimada Addis Ababa
Next articleDegdeg: Golaha wakiillada somaliland oo kalsoonidii kala noqdeen Faysal Cali Waraabe
Finland oo Soomaaliya ugu deeqday lacag Badan
Shirka Madasha Arimaha Bini’aadanimo oo ka furmay Muqdisho